အမေ့သား: အပယ် ခံနေ့ ( သို့ ).သတ်ပုံ မှားတဲ့နေ့ 
အပယ် ခံနေ့ ( သို့ ).သတ်ပုံ မှားတဲ့နေ့ 
ခေါ်သံကို ပြန်ထူးရင်း ဘယ်သူလဲဗျို့ဟု ပြန်ပေးမိသည်။
ဦးတင်ဝင်းနဲ့ ဦးလှသောင်းတို့ကိုကြီးဟု. ညီမငယ် အိမ်ရှေ့မှလှမ်းအော်သည်။
လာပြီ ......လာပြီ.........ဗျို့ 
ကသောကမျော အဝတ်အစားဝတ်ပြီး အိမ်ရှေ့ထွက်တော့ ဦးလေးကြီး နှစ်ယောက်
ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဘော်ဘော်နှစ်ယောက်ပေါ့
ဦးလှသောင်းက (၇၀)နီးနီး .....ကျန်သေးတယ်ဗျ
ဦးထွန်းနိုင်..... သူက တော့ (၅၇)လောက်ရှိမည်၊
သူတို့ (၃)ယောက်သည် ကျွန်တော်နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်
သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုပါတော့ .........ဪ ကျွန်တော်အသက်ကတော့
ခုလည်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားဖို့ လာခေါ်ခြင်းသာဖြစ်ရမည်။
ဟာ........ ဦးတင်နဲ့ ဦးလေးလှ....... ဆိုဗျာ........ .....ဘာကိတ်
ဆို လည်း မလုပ်နဲ့ဘာကိတ်တွေညာကိတ်တွေလည်းမလုပ်နဲ့မြန်မြန်လာဆိုင်သွားမယ်၊
ဟိုကောင် ထွန်းနိုင် ဆိုင်မှာစောင့်နေတယ်။
ဪ..... မောင်မျိုး မင်း လက်နက်တွေယူလာအုံး၊ မင်းရော ဘာဂွင်တွေ တွေ့ ထားသေးလဲ။
ဟိုကောင်ကတော့ အပိုင်လို့ ပြောတာပဲကွ........
ဒါဆို ခဏလေး သွားယူလိုက်အုံးမယ်...... ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်တော် အိမ်ပေါ်ပြေးတက်ပြီး
အခန်းထဲက လက်နက်ကိရိယာတွေယူပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။
(၃) ယောက်သား လမ်းထိပ်က မောင့်လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းဆိုင်လေးသို့ ချီတက်ခဲ့ ကြသည်။ ဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ ဘုံ....... တနည်းအားဖြင့် ဗိမ္မာန်
တမျိုးပြောတော့ ဘူမိနသံ နေရာ ဆိုင်ထောင့်လေးမှာ ဦးထွန်းနိုင်က နေရာယူလျက်
ဦးလေးတို့ ကလည်း ကြာလိုက်တာဗျာ.........
မောင်မျိုး ကို ဝင်ခေါ်နေတာဟ........ မင်းကလည်း ခဏလေးစောင့်ရတာကို ဖြစ်နေလိုက်တာကွာ
ညီလေးရေ. ......လက်ဖက်ရည် (၃)ခွက်ဟေ့.......
ဦးထွန်းနိုင်က လက်ဖက်ရည်လှမ်းမှာ ကျွန်တော်တို့ က နေရာကိုယ်စီ ယူလိုက်ကြသည်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်ကယူလာသော လက်နက်များကို စားပွဲပေါ် တင်လိုက်သည်။
ဦးထွန်းနိုင်က သူရဲ့ လက်နက်တချို့ မြေပုံတချို့ ထဲမှာ ဆွဲထုတ်ပြီး........
အနေအထားကတော့ အပိုင်ပဲဗျ ....ဒီဂွင်...... ဒီလမ်းကြောင်းကို စောင့်ကြည့်နေတာ
(၄)နှစ်လောက်ရှိပြီဗျ၊ ဒီတခါကတော့ အပိုင်ပဲ ဒီမှာကြည့် ဆိုပြီး...........
လမ်းကြောင်းက..... ဒီကစမယ်၊ ပြီးတော့ ဒီဖက်ကိုလာတယ် နောက်တော့ ဒီထိပ်ကိုပြန်ရောက် အခုဒီကိုသေချာပေါက်လာရတော့မယ်။ စောင့်ပြီး အပိုင်သိမ်းရုံပဲ ....ဟုတ်တော့အတော်ဟုတ်သည် သူပြောသွားပြသွားတဲ့ အနေအထားကတော့ အချီကြီးပဲ......
မောင်မျိုး မင်းဖက်ကရော ဘာထူးခြားသေးလဲ?
သိပ်အထူးခြားတော့မဟုတ်ဖူး... တချက်ကောင်းလေးတွေတော့ရှိတယ်၊သတိတော့ထားရမဲ့ 
အနေအထားလေးတွေ... ဂွင် အသေးလေးတွေပါ။ ဦးထွန်းနိုင် ဂွင်လောက်တော့ မမိုက်ပါဖူး၊
အေးပြစမ်းပါအုံး .......မင်း အနေအထားလေးတွေ၊ ကျွန်တော် ဟာလေးတွေကသိပ်အကြာကြီးမဟုတ်ဖူးဗျ
အနီးကပ်လေးတွေ တချက်ကောင်းလေးတွေပါ၊ ဒါပေမဲ့ မိလိုက်ရင်လည်း အပြတ်ပဲနော်......
ဒီမှာကြည့်..... ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်လက်နက်တွေ၊မြေပုံတွေထုတ်ပြီး
ဒီကောင်ကတော့ တော်တော်ငြိမ်တယ၊် သူပြီးရင်ပြီးတယ်၊သူက ဟိတ်...ဆို လှည့်ကြည့်စရာကိုမလိုတာ လွှတ်သာပစ်လိုက်ဗျာ ......အဲ့လောက်စိတ်ချရတာ ကဲ... ကဲ ဒါဆိုလည်း နောက်ဆုံးပိတ်လေးလုပ်လိုက်ကြကွာ၊ ရက်ကနီးနေပြီ. ဒီနေ့ (၁၃)ဆိုတော့ နောက် (၃)ရက်ပဲလိုတော့တာကွ။ ဦးလေးတင်နဲ့ ဦးလေးလှက ဝင်ပြောရင်းကျွန်တော်တို့ စီမံကိန်းအတွက်
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်မျက်ဝန်းထောင့်မှ အရိပ်တခုလှမ်းတွေ့ လိုက်ရသည်။
သတိထားမိတာတော့ ဆိုင်ကိုစဝင်လာကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ဘေးခုံမှာထိုင်နေတဲ့ကုလားတယာက်ကိုဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့ ပြောသမျှ နားစွင့်နေသလို၊ တချက်တချက် လှမ်းလှမ်းကြည့်နေသလို ခုလည်း နောက်ဆုံးအဆုံးအဖြတ်အတွက် ရွေးချယ်တော့မည်ဆိုမှ
ဒင်းက တချက် ထပြီး စောင်းငဲ့ကြည့်ပြန်သည်၊ ဖျတ်ကနဲ့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မသိသလိုနဲ့ 
ကျွန်တော်တို့ လည်း ကဲ.... ဒီအစီအစဉ်နှစ်ခုတော့ မလုပ်ဖူးကွာဆိုပြီး ဦးထွန်းနိုင်ကမှင်နီနဲ့ ဝိုင်းလိုက်သည်။
ကျန်တဲ့နှစ်ခုတော့ အပိုင်လုပ်မယ်ကွာဆိုပြီး အဆုံးအဖြတ်ယူလိုက်ကြသည်။ ဘေးဝိုင်းကကုလားလည်း ဆတ်ကနဲ့ တချက်ကြည့်ပြီး မသိသလို လက်ဖက်ရည်ဆက်သောက်နေသည်။
ကျွန်တော်တို့ (၄)ယောက်လည်း အသီးသီးလမ်ခွဲခဲ့ကြသည်၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်ကိုရောက်ခဲ့ပေမဲ့ 
ကျွန်တော်တို့ စီမံကိန်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ဒါဟာလည်း သိပ်မထူးဆန်းတော့ပေ။ အဆင်ပြေတဲ့အခါရှိသလို
ကဲ. ......ဒီနေ့ တော့ တော်ပြီ ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး ......ညီလေးရေ ရှင်းမယ်ဟေ့..... စားပွဲထိုးလေးကို လှမ်းခေါ်တော့...... ကောင်လေးက အစ်ကို ဟိုဖက်ဝိုင်းက အစ်ကိုက အားလုံးရှင်းပြီးသွားပြီတဲ့.......
တို့ အသိလား .......မေးမေးပြောပြောလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကုလားမိသားစုတစ်စု
ကုလားကပြုံးပြီး လက်ပြသည်၊ ကျွန်တော်လည်း ရောယောင်ပြန်ပြုံးပြီး လက်ပြန်ပြမိသည်။
ခဏကြာတော့ ကုလားက သူ့ မိန်းမဟုထင်ရသော ကုလားမကို တိုးတိုးပြောပြီး ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းသို့ ထလာသည်။ ရောက်လာတော့ ......ဆရာ ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိလား...
ကျွန်တော်သေသေချာချာကြည့်သည၊်........မမှတ်မိပါ လုံးလုံးမသိ.... သေချာတာကတော့ ကျွန်တော့်အသိထဲကမဟုတ်တာပဲ.....
ဦးလေးတင်............. သူကိုသိလားဟု ဘေးက ဘော်ဘော်တွေမေးတော့လည်း
ငါတို့ လည်းမသိဖူးကွ၊.. ထားပါတော့ မင်းက ငါတို့ ဖို့ ပိုက်ဆံဘာလို့ ရှင်းတာလဲ....
ဆရာတို့ က ကျွန်တော့်ကျေးဇူးရှင်တွေမို့ ပါ၊ ကျွန်တော်တောင်ဒီလောက်ရတယ်ဆိုမှတော့ာ
ဆရာတို့ လည်း ထော်ပြီပေါ့ ဟုတ်တယ်....... မဟုတ်လားဆရာ
ကျွန်တော် ဆန်အိတ်ခွံတွေဝယ်တယ၊် ပြီးတော့ပြန်ရောင်းတယ်...
အဆင်မပြေဖူးဆရာ. အိမ်မှာကလေးကလည်း(၃)ယောက၊်ယောက်က္ခမကလည်းဗြစ်တောက်ဗြစ်တောက်နဲ့ 
ဟိုတပတ်က ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လက်ဖက်ရည်ဝင်သောက်နေတုံး
ဆရာတို့ ပြောစကားတွေကြားတော့ ကျွန်တော် အရမ်းကိုသိချင်လာတယ်၊
ဒါကြောင့် အသာလေး ခိုးနားထောင်လိုက်၊ မသိမသာလေး ခိုးကြည့်လိုက်လုပ်နေတာလေ
ဒီဆရာတောင် ကျွန်တော်ကို သင်္ကာမကင်းဖြစ်နေသေးတယ်လေ.....
ပြီးတော့ ဆရာတို့ သွားခါနီးမှာ ဆရာတို့ စာအုပ်ပေါ်ကြည့်လိုက်တော့
မှင်နီနဲ့ ဝိုင်းထားတဲ့ ဂဏန်းနှစ်ကွက်တွေ့တယ်ဆရာ...ကျွန်တော်လည်းမှတ်ထားပြီး
ရပ်ကွက်ထဲရောက်တော့ အပိုင်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ 
အောလိုက်တယ်ဆရာ... ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ မှင်နီနဲ့ ဝိုင်းထားတဲ့ အထဲက
ဂဏန်းတခုက ထွက်သွားတယ်လေ၊ မှင်နီနဲ့ ဝိုင်းထားမှတော့ သေချာတာပေါ့ဆရာ....
မဟုတ်ဖူးလား...... အခုဆို ယောက္ခမလည်း ပါးစပ်ပိတ၊် မိန်းမ ကလည်း
အနဲ..... အနဲ...နဲ့ ဖူးဖူးမှုတ်ထားတယ်ဆရာ၊ ဆရာတို့ ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်၊
ကန်တော့တောင် ကန်တော့ချင်တယ၊် ကုလားပြောနေသော စကားများကို
ကျွန်တော်တို့ လေးယောက် မကြားတချက် ကြားတချက်ဖြင့် နားထောင်နေမိသည်။
ကုလားကထပ်ပြီးတော့ ဆရာတို့ ရော ဘယ်လောက်ဖိုးတောင်ပေါက်လဲဟင်..... လိုထပ်မေးတော့
ကိုရွှေကုလားရယ်...... တော်ပါတော့ကွာ. မင်းကြည့်ပြီး ထိုးလိုက်တဲ့ အကွက် မှင်နီဝိုင်းထားတဲ့အကွက်က ငါတို့ ရဲ့ ပယ်ဂဏန်းကွ...........ပယ်ဂဏန်း သိရဲ့လား ကိုရွှေကုလားရယ် ......
ကုလားလည်း........ဗျာ...... တလုံးပဲပြောနိုင်ပြီး သူ့ ဝိုင်းကိုကုပ်ကုပ်လေးပြန်သွားထိုင်နေလိုက်တော့သည်။
ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းလည်း အတန်ကြာတိတ်ဆိတ်ပြီး တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ပြီး
Posted by အမေ့သား at Sunday, March 10, 2013